Imaanshaha cudur faafa ayaa dhammaanteen si qoto dheer u fahamnay in caafimaadku yahay hantida ugu weyn. Marka laga hadlayo badbaadada jawiga hawada, bakteeriyada iyo fayrasyada baahsan, weerarada dabeylaha boodhka, iyo formaldehyde -ka xad dhaafka ah ee guryaha cusub ayaa sidoo kale ka dhiga saaxiibo aad u badan inay fiiro gaar ah u yeeshaan hawada ...
Macaamiisha Qaaliga ah: Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in kororkeenna cajiibka ah ee 2020 awgeed, xafiiskeenna Shenzhen uu u guuray meel cusub bishii Abriil. Goobta cusub waxay ku taal 33 / F, Dhismaha 11, Tiananyungu Industrial Park, Bantian Street, Degmada Longgang, Shenzhen City, Gobolka Guangdong, Shiinaha. Waxaan eegeynaa ...
Ka walaacsanaanta 'COVID-19', dad badan ayaa ka walwalsan tayada hawada gudaha iyo in nadiifinta hawadu ay caawin karto. Khubarada Warbixinta Macaamiisha waxay soo bandhigayaan waxa nadiifinta hawada ee hoyga ah ay runti sameyn karto markay tahay nadiifinta hawada. Waxaa jira seddex nooc oo waaweyn oo hawada lagu nadiifiyo ah oo markete ...
Markii uu faafay COVID-19, waxay noqotay wax la isku raacsan yahay in wajiyada la xirto markii la baxayo. Sidaa darteed, jawiga gudaha ee ay dadku isugu yimaadaan dhismooyinka xafiisyada, suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto, hoteelada, maqaayadaha, iwm. ...
May 7th-May 8th 2021 Summit Cross-border E-commerce Summit & Sourcing Fair ayaa lagu qabtay Hoolka 8 ee Shenzhen Futian International Convention and Exhibition Center. Dhulku waa la soo buuxiyey. Iyadoo hal ku dhigeedu yahay "adduunku wuu yar yahay, ganacsiguna wuu ka weyn yahay", wuxuu soo jiitay in ka badan 300 + Ali oo ...
Tilmaamo wax ku ool ah oo ku saabsan badbaadinta naftaada iyo dadka kaleba COVID-19
1. Xidho maaskaro daboolaya sankaaga iyo afkaaga si ay kaaga caawiso naftaada iyo dadka kaleba. 2.Dhig 6 fuudh kuwa kale oo aan kula noolayn. 3. Hel tallaalka COVID-19 markii aad heli karto. 4. Ka fogow dadka badan iyo meelaha hawo xumada leh ee hawo la'aanta ah. 5. Gacmahaaga badanaa ku dhaq saabuun iyo biyo. Adeegso ha ...
waanu wada isticmaali karnaa waji-wadaha iyo sifaynta hawada inta lagu jiro cudurrada faafa
Dhawaan, marka laga reebo Shiinaha, cudurka faafa ee adduunka cusub wuxuu bilaabay inuu mar kale noqdo mid daran, xitaa wuxuu ka sii daran yahay kii sanadka 2020. Sidaa darteed, weli waa lagama maarmaan in la xirto maaskaro banaanka, waana lagama maarmaan in la nadiifiyo hawo nadiifiyaha guriga. In kasta oo sifaynta hawada aysan si hufan u shaandheyn karin ...
Dhamaanteen waan ognahay in dadka aduunka ku nool ay helayaan talaal ka dhan ah COVID 19. Taas macnaheedu ma aha inaan nabad qab ku filan nahay mustaqbalka? Xaqiiqdii, qofna ma hubin karo markaan shaqeyn karno oo aan si xor ah u bixi karno. Weli waan arki karnaa inay jiraan wakhti adag oo horteenna ah oo u baahan in la ogaado si loo ilaaliyo ...
Sifeeyaha hawadu ma daahirin karaa Covid-19?
Qiijiyuhu markuu ka tagay aragtida dadka, dad badan ayaa runtii qabay aragti shaki leh oo ku saabsan sifaynta hawada, Waxay dareemeen inaan loo baahnayn in la iibsado qalabka hawada lagu nadiifiyo. Ma aysan dareemin wax dhib ah markay neefsanayaan bannaanka maalin kasta, laakiin imaatinka 'Covid-19' ayaa dadka ka dhigay inay mar kale ka fikiraan, Waxaa jira dem ...
Kusoo dhawow Si Aad U Booqatid Barnaamijkeena Nadiifinta Hawada ee Imaatinka 2021-ka Live Show
Kusoo dhawow Si Aad U Booqatid Talooyinkeena Nadiifinta Cirka ee Tayada Sare ee 2021 Live Show
Shenzhen Guanglei Electronic Co., Ltd. waxay barnaamij toos ah uga samaynaysaa Made-in-China.com. Nagala soo qaybgal hada! Cinwaanka: Talo Bixinta Nadiifinta Tayada Sare ee 2021 Talo Bixinta Waqtiga: 2021-03-03 16:00 PM UTC + 08: 00 Guji cinwaanka soo socda si aad toos ugu gasho qolka bandhigga tooska ah: https://live.made-in-china.com/ qolka-dmJnEcxWWQ ...
Kusoo dhawow Soo Booqo Barnaamijkeena Nadiifinta Hawada ee 2021 iyo Showga Live Ozone Generator
Shenzhen Guanglei Electronic Co., Ltd. waxay barnaamij toos ah uga samaynaysaa Made-in-China.com. Nagala soo qaybgal hada! Cinwaanka: 2021 Sifeeyaha Hawada ee kulul iyo Generator Generator Waqtiga Bilowga: 2021-03-02 20:00 PM UTC + 08: 00 Guji cinwaanka soo socda si aad toos ugu gasho qolka bandhiga tooska ah: https: //live.made-in-china. com / qol-NxEQ ...
Ozone Air Sifee Home Depot , Home Air miira, Dabcan badhxaan Home Air miira , Best Home Air miira Uk , Coobbi Air Home Air miira , UV Home Air miira , All Products